I-5 Iindlela ezinkulu ze-SEO ezinokulwa neemvumi ezinokuthi zisebenzise | Martech Zone
Ke uyimvumi ejonge ukwenza ingxelo kwi-intanethi kwaye ucinga ngokwenza ubuchule bokukhangela i-injini yokukhangela (SEO) ikusebenzele? Ukuba kunjalo, cetyiswa ukuba, ngelixa kungekho bullet yomlingo ekusebenziseni injini yokukhangela, akukho nzima ukuphucula ukubonakala kokukhangela ngaphakathi kuGoogle nakwiBing.
Nazi iindlela ezintlanu ezifanelekileyo ze-SEO zeemvumi zokuphucula ukubonakala kweinjini yokukhangela.
Ukubhloga yindlela elungileyo yokuqatshelwa ziinjini zokukhangela. Qiniseka nje ukuba iwebhusayithi yakho ibhalisiwe kwiinjini eziphambili (uGoogle, Yahoo!, Kunye neBing) ukuze bazi ukukhasa kwindawo yakho kunye nesalathiso sento oyiposileyo.
Xa ubhloga, qiniseka ukusebenzisa umxholo wegama elinegama (leyo yibuzzphrase ethetha ukuba "sebenzisa amagama aphambili rhoqo kumxholo wakho"). Umzekelo, ukuba ubhloga malunga ne-bass clarinet, kungcono ukusebenzisa ibinzana elithi "bass clarinet" kwisihloko kunye namaxesha ambalwa kumxholo.
2. Sebenzisa ubuGcisa kuGoogle
Ukuba ubhloga (kwaye kufanele ukuba ube njalo, jonga ngasentla) malunga nezifundo ezinxulumene nomculo (isixhobo sakho, iingoma ezimnandi, amaqela amatsha okanye anempembelelo, abaqambi abakhulu, njl.) Ke, ungowombhali. Kodwa kufuneka ugqithele ngaphaya kokubhala kwaye ube Umbhali kaGoogle.
Ukwenza oko kwenzeke, kufuneka kuqala iakhawunti kuGoogle + (kukhuselekile ukuba ukuba neakhawunti kuGoogle + kuya kukunceda ngeSEO ngokunjalo, kuba uGoogle + uyimveliso kaGoogle). Kwiprofayile yakho yeakhawunti kuGoogle +, uza kubona icandelo elithi "Umnikeli ku" phantsi kwe "Amakhonkco." Qiniseka ukuba ugcwalisa ii-URL kunye namagama eewebhusayithi obhale kuzo (qiniseka ukufaka ibhlog yakho).
Kananjalo, ngalo lonke ixesha ubhala inqaku, qiniseka ukuba kukho ithegi yekhonkco kwintloko yeposi engqinisisa iakhawunti yakho yeGoogle +. Ngokucacileyo, uyakutshintsha "i-ID kaGoogle +" kunye ne-ID yakho yokwenyani.
3. Yongeza imifanekiso yakho
Amathuba mahle kakhulu ukuba umxholo wakho uya kubandakanya imifanekiso. Ukuba kunjalo, ngalo lonke ixesha ufaka umfanekiso kumxholo wakho, kuya kufuneka ufake inkcazo yomfanekiso kwiimpawu ze "alt". Yile ndlela "uxelela" ngayo iinjini zokukhangela ukuba yintoni emfanekisweni; abanabo ubukrelekrele ngokwaneleyo ukuba babone yonke imifanekiso ngesiqulatho esipinkiweyo. Zive ukhululekile ukusebenzisa amagama akho aphambili kule nkcazo.
4. Sebenzisa iYouTube
Ufuna ukuqatshelwa kwezinye iindawo ngaphandle kwebhlog yakho, akunjalo? Ukwenza oko kwenzeke, kuyakufuneka uvelise umxholo kwezinye iindawo ngaphandle kwebhlog yakho. I-YouTube yindawo entle yokupapasha umxholo wevidiyo, ngakumbi ukuba ufuna ukubonisa izakhono zakho zempambano kwisixhobo esithile.
Ukongeza, unokufaka iividiyo zakho zeYouTube ngokuthe ngqo kwibhlog yakho. Oku kungawuphucula umxholo webhlog yakho (nantsi ifayili ye- umzekelo omkhulu). Qiniseka ukuba uyayimaka ividiyo ngala magama aphambili ebesithetha ngawo, ngokunjalo.
5. Sebenzisa uhlalutyo lukaGoogle
Uhlalutyo lukaGoogle yindlela elungileyo yokujonga ukusebenza (okanye ukungasebenzi ngokukuko) kweendlela zakho zokwenza ngcono. Qinisekisa ukuba ibhlog yakho ibhalisiwe kuGoogle Analytics. Yindwendwele rhoqo kwaye ubone ukuba yintoni eqhuba ukugcwala kwindawo yakho. Umgaqo olula apha ngulo: nantoni na esebenzayo, yenza okungakumbi ngayo kwaye nantoni na engasebenziyo, yeka ukuyenza. Elula, akunjalo?
tags: imvumi seoenjini yokukhangela nounSEO
Sebenzisa iMithombo yeendaba yeNtlalontle yokuKhokelela kuKhokelo